Apologetic Archives | New Light Myanmar %
Posted on 01Sep September 1, 2018
စကြာဝဠာကြီးဟာ အမြဲတမ်း ဒီအတိုင်း ရှိနေခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့မှာ အစရှိပါတယ် – ဘာကဖြစ်စေတာလဲ? […]
ဘုရား အမှန်တကယ်ရှိတယ်ဆိုတာယုံကြည်ဖို့ ရှင်းလင်းတိကျသော အကြောင်းပြချက်များ(၆)ချက် ပြောပြပါမယ်။ — မေရီလင်းအာဒမ်ဆင်ထံမှ
ကမ္ဘာမြေကြီး – အရွယ်အစားက တကယ့်ကို ကွက်တိပါ။ ကမ္ဘာ့အရွယ်အစားနဲ့ သူနဲ့လိုက်လျောညီထွေတဲ့ ဆွဲအားက နိုက်ထရိုဂျင်နဲ့ အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့၊ ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်အထက် မိုင် […]
Posted on 04Aug August 9, 2018
ယေရှုသည် ဘုရားလော (သို့) သားတော်လော။ (Is Jesus God or the Son?)
နိဒါန်း ယနေ့တွင် ခရစ်ယာန်တို့အား အမေးမြန်းခံရဆုံးမေးခွန်များထဲတွင် “ယေရှုသည် ဘုရားလား၊သား တော်လား” ဆိုသည့်မေးခွန်သည်လည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်များ အနေဖြင့် ဖြေရှင်းမည်ဆိုပါက ရုတ်တရက် ဖြေရန်မလွယ်ကူပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ယေရှုသည် ဘုရားလည်းဖြစ်သား လည်းဖြစ်သည်။ ဤမေးခွန်းကိုဖြေရန်မှာ သမ္မာကျမ်းစာ၏ဆိုလိုရင်းကိုကောင်းစွာ နားလည်သဘောပေါက်ရန်လို သည်။ သမ္မာ ကျမ်းစာတွင် ယေရှုသည်ဘုရားအဖြစ်သော်လည်းကောင်း၊သားအဖြစ်သော်လည်းကောင်း၊…
Posted on 04Aug September 2, 2018
တိုက်ခိုက်ခံနေရသော ခရစ်ယာန်ယုံကြည်မှု The Christian Faith Under Attack
ဖန်ဆင်းရှင် ကိုးကွယ်သူများ အားမေးခွန်းထုတ်ရာ တွင် အမေးခံဆုံးမေးခွန်းမှာ “ဖန်ဆင်းရှင်က အများကြီးလား။ ဒါမှမဟုတ် တစ်ယောက်ထဲလား” ဆိုသည့်မေးခွန်းပင်ဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်များအနေ နှင့် လည်းဤမေးခွန်းကို “မတူဘူး” ဟုဖြေရုံ ကလွဲ၍ မည်ကဲ့သို့ မတူကြောင်းကိုမူ မပြောတတ်ကြတော့ပေ။ အမှန်စင်စစ် ဤမေးခွန်းမှာအလွန်ပင်ရိုးရှင်းသည်။ ခရစ်ယာန်များ ကိုးကွယ်နေသော ဘုရား မှာ #သမ္မာကျမ်းကပြောသောဘုရာ (God of the Bible) ဖြစ်သည်။
ခေတ်သစ်သိပ္ပံပညာ ထွန်းကားလာသည်နှင့်အမျှ ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ချက်သည် အတိုက်ခိုက်ခံရဆုံး ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်ဖြစ်လာသည်။သို့ရာတွင် ကျိုးကြောင်းညီညွတ်သော ယုံကြည်ချက် (Rational Faith) အဖြစ် ဆက်လက်ရှင်သန်ရပ်တည်လျက်ရှိသည်။
မကြာသေးခင်ကဘာသာမဲ့ သိပ္ပပညာရှင်များဖြစ်သော Richard Dawkins ရဲ့ The God Delusion၊ Sam Harris ၏ The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason၊ Christopher Hitchens ၏ God is not Great: How Religions Poisons Everything စသည့် စာအုပ်များသည် လူအများ၏ဟစိတ်ဝင်စားခြင်းကို ခံရလျက်ရှိကာ ဘာသာတရားနှင့်ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ချက်များအား ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် မရှေးမနှောင်းမှာပင် […]
Apologetic ဆိုတာ ဘာလဲ
Greek ဂရိစကားမှ ဆင်းသက်ခြင်း
Apologetic ဆိုသည်မှာ ဂရိ စကားလုံး (apologia) မှ ဆင်းသက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သဘောတရားအားဖြင့်၊ ကိစ္စရပ် တစ်ခုခု အတွက် အဖြေစကား ပေးခြင်း၊ ခုခံ ချေပခြင်း၊ သက်သသောဓက ပြခြင်း ဟု ဆိုလိုသည်။
ရှေးယခင်၊ အေသင် တရားခွင်၊ တရားရုံးများတွင် မည်သည့် ချေပခြင်း ဆိုင်ရာအတွက်ကို၊ မည်သည့် စွပ်စွဲချက်ကို မဆို ပြန်လည် ချေပ ရန် အတွက် တရားပြိုင် သို့မဟုတ် ခုခံ ချေပသူကို ကို ခွင့်ပြုထားသည်။ ဤကဲ့သို့သော အနေအထားမျိုးတွင် (defendant) တရားပြိုင်၏ မည်သည့် အဆိုပြုချက်ကိုမဆို Apologetic ပြုခြင်းဟု ဆိုနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် Apologetic သည် ခရစ်ယာန် သို့မဟုတ် ယုံကြည်ခြင်း ဆိုင်ရာ အတွက် အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ တရားခွင်တို့အတွက် သုံးနှုန်းသော စကားလုံးမှာ (apologia) ဖြစ်သည်။ 
Apologia နှင့်ပတ်သက်ပြီး အကောင်းဆုံး ဥပမာတစ်ခုမှာ ဆိုကရေးတီးမှ ထူးဆန်းသောနတ် ဘုရား များအကြောင်း တရားဟောပြောခြင်းအတွက် တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရသည်။ သူလည်း ခုခံချေပ ခွင့်ရခဲ့သည်။ ယင်း […]
Posted on 04Aug September 1, 2018
ဘုရားမဲ့ဝါဒီ ၏ ထင် ေယာင်ထင် မှား ခြင်း